Mateki madiki emaoko, muunganidzwa wemagadzirirwo | Kunyora
Matatoo madiki emaoko, mazano uye kuunganidzwa kwemagadzirirwo
Antonio Fdez | | Tattoos, Mavara pamaoko
Kunyora mavoko ako hachisi chisarudzo chinofanira kuitwa zvishoma. Hazvina mhosva kuti idiki sei iyo nyoraIchave ichioneka mukati megore rose, kunze kwekunge iwe ukapfeka magurovhosi muchando Nekudaro, zvisinei nekuti iwo magadzirirwo anoonekwa, mamwe anogara akangwara kupfuura vamwe. Uye chaizvo nezve akangwara atichataura mune ino chinyorwa nezve zvidiki zvidiki zvemaoko. Kufunga nezve kutora rimwe ramaoko ako nyora? Pano iwe unogona kutora mazano.
ari zvidiki zvidiki zvemaoko Ivo ndivo chete sarudzo yekutora nyora pane ino chikamu chemuviri uye voenda vasina kucherechedzwa. Zvino chii mhando yetatoo tinogona kusarudza? Chokwadi ndechekuti isu tine mikana yakati wandei pakusarudza. Kana iwe uchida kuti iyo tattoo ive nenjere sezvinobvira, zvakanaka kuzviita mukati meruoko, pakati pechigunwe uye index index.
Isu tinofanirwa kuziva kuti matattoo madiki emaoko anochinja zvakanyanya kufamba kwenguva. Izvo zvinodikanwa kutora zvakanyanya kutarisirwa panguva yekurapa maitiro uye mumashure kuitira kuti iyo tattoo iratidzike yakanakisa mushure memakore mashoma. Zvikasadaro, isu tinowana iyo yakashata kwazvo tattoo iyo inogona kutombo nyangarika zvishoma.
Kana zvakadaro mhando dzediki dhizaini dhizaini kwemaokoZvakanaka, tine zvakawanda zvingasarudzwa. Muchinjikwa, mangoda, moyo, zvipfupi mitsara, zvinokurudzira mazwi, shiri kana kunyange dehenya. Mu gallery yematatoo madiki emaoko Pazasi iwe unogona kuwana kurudziro iwe yawaitsvaga.
Mifananidzo yeDiki Ruoko Matatoo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Matatoo madiki emaoko, mazano uye kuunganidzwa kwemagadzirirwo
Rakareruka kana rakanyanyisa mutsetse nyora pamaoko
Fernando Alonso anotora tattoo paruoko rwake